China KOCKS mill roll roll fekitori uye vagadziri | Dongxing
Yakakwira kuita yakakwira kumhanya simbi yakatenderera mhete mhete zvinhu: yakakwira kuita yakakwira-kumhanya simbi roller roller ndeyesimbi yesimbi roller roller, inoenderana nenyika yenyika chiyero che cast cast roll gb / t1503-2008. Yayo huru alloy kuumbwa ndeye vanadium, nickel, tungsten, molybdenum, niobium, cobalt uye zvimwe zvinhu, zvine kabhoni zvemukati isingasvike 1.6%, phosphorus yemukati inofanirwa kudzorwa pazasi pe0.03%, chromium zvemukati inofanira kunge iri pasi pe5%, sarufa inofanirwa kuve inodzorwa pazasi 0,03%, Izvi zvinoita kuti zvinhu zvine kukwirira kusakara kusagadzikana uye kukanganisa kuomarara, uye inovimbisa kuti chinotenderera mhete haizoonekwi diki kutsemuka, block kudonhedza uye mhete kuputika mukushandisa. Kunyanya, zvirimo mutungsten zvakanyatso kudzorwa, uye kusarura hakuzoitika panguva yekukanda centrifugal, saka hushoma kudonha mutsauko idiki kwazvo mushure mega gaya kukuya, uye huwandu hwesimbi inopfuura hauzodzike zviri pachena.
1.Ensure iyo machine kurira kweiyo roller mhete uye zvizere zvinosangana nezvinodiwa zvekudhirowa.
2.Iva nechokwadi chemukati mhando yemupumburu mhete, uye 100% yemupumburu iringi ichave pasi pekuedzwa kusingagadzirisike; kucherechedzwa kweringi rinoteedzera kunotevedzera zvirevo zvekambani yako uye kunzvenga zvinhu zvinokanganisa zvine mutsindo zvine simba.
3.Iva nechokwadi chekugara kwenguva refu kwehunhu hwemhete yekutenderera, uye hapana hurema hwemukati hwemukati hwakadai semaburi, maburi ejecha, kutsemuka, inclusions, nezvimwewo pasi pemamiriro ekushandisa, ringi rinotenderera harizoonekwe chiitiko yenyama inodonha uye kutsemuka.
4.Ensure kuenderana kweshanduro mhedzisiro yeakapihwa roller mhete mukati meanoshanda anoshanda roll roll, uye iyo yechokwadi vimbiso nguva yeiyo roller mhete ndiyo inoshanda yekushanda roll dhayamita nguva yemupumburu mhete.
5.Ku kushandiswa kwakajairika kweringi rwesimbi, kambani yedu icharipa ringi nyowani yemupumburu wakakonzerwa nekugadzirwa nekugadzirwa kweringi mushure mekusimbiswa kwemativi ese ari maviri munguva.
Main midziyo kuti chinotenderera mhete kugadzira:
1) Carbon uye okisijeni yekumisikidza chiridzwa, chidimbu saizi analyzer, tensile uye inokanganisa kuyedza muchina, metallographic microscope, ultrasonic flaw detector;
2) 50L / 300L bhora chigayo, 300lz yakavhenganiswa dryer, skrini yekuchenesa muchina, yh32-200 ina ikholamu hydraulic yekudhinda;
3) Zgj-100-2.5x inodziya sintering chiravira, hudyu yevira;
4) M1432a / M131W yakakwira chaiyo cylindrical grinder, md2120a yemukati grinder, m7150 × 6 yakatwasuka shaft pamusoro grinder, sk001 imwechete axis CNC yakakosha roller iringi slotting grinder;
5) At820e mhando ina akabatana CNC paburi hwokugaya hwakabvira muchina kupinza kubva Italy;
Pashure: Mechanical rinoumba goridhe rwakapetwa mhete
Carbide Roller Rings Kune Pre-Kupedza Mill
Kocks Mill Kutenderera Mhete
Mhete Kune Mill Rolls
Tungsten Carbide Mill Rolls Mhete
Machine Chikamu, Tungsten Carbide Roller, Mill Kutenderera Rings, Yakasimbiswa Carbide Roll, Tungsten Carbide Roller Mhete, Tungsten Carbide Kutenderera,